सुष्माका यस्ता दिन पनि आएछन् ! – Mero Film
सुष्माका यस्ता दिन पनि आएछन् !
२०७५ असार २६ गते १३:१०
धेरै पहिलाको कुरा होइन । २ बर्ष अघि पनि हिरोइन सुष्मा कार्कीलाई निर्माताले एउटा आइटम गीतमा नचाउन मरिहत्ते गर्थे । सुष्मा कार्कीलाई आइटम नृत्य गराउँदा सिनेमाको ब्यापार तगडा हुन्छ भन्ने सोच्थे निर्माता । तर, प्रेमीको लफडामा परेर क्रेज घटाएपछि सुष्मा कार्कीलाई हिजोआज संचारमाध्यममा स्थान पाउन अर्की हिरोइनसँग तर्किएर हिड्नुपरेको छ ।
सुष्मा कार्कीलाई सिनेमामा लिन त निर्माताले रुची नै देखाउँदैनन् । सुष्मा कार्कीको पनि अभिनय रहेको ‘साली कस्को भेनाको’ ट्रेलर रिलिज भएको छ । यो सिनेमाको ट्रेलर हेर्दा सुष्मा कार्कीलाई २ पटक मात्र झुलुक्क देख्न पाइन्छ । २ बर्ष अघि आएकी हिरोइन मरिष्का पोख्रेल हाबी भएको ट्रेलरमा सुष्मालाई स्थान नै नदिनुको अर्थ के त ? सुष्मा कार्की चल्दिनन्, उनको अनुहार बिक्दैन भनेर नै त हो ।
सुष्मा कार्कीले विनय श्रेष्ठको निर्माणमा बनेको रोमियो एन्ड मुना सिनेमामा काम गरेकी छिन् भन्ने त दर्शकलाई खासै थाहा छैन । किनकी, उनलाई सिनेमाको प्रमोशनमा ल्याइएको छैन । सिनेमाको ट्रेलरमा पनि उनी २ पटक मात्र देखिएकी छिन् ।
सुष्मा कार्की सिनेमा नै बोक्न सक्ने क्षमता राख्ने हिरोइन होइनन् थिइनन् । अहिले त भर्खरै भर्खरै आएका हिरोइनले उनलाई ट्रेलरबाट पनि हटाउन थालेछन् ।
सुष्मा कार्कीको यस्तो दिन पनि आएका हुन् त ? बेलैमा नसोचेपछि सिनेमाको करिअर आज छ भोली छैन नै हुन्छ ।